Paypal ဖြင့် Bitcoins ကိုဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ စီးပွားရေးဘဏ္ဍာရေး
Encarni Arcoya | 31/12/2021 11:13 | စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
Paypal ဖြင့် Bitcoins ကို မည်ကဲ့သို့ ဝယ်ယူရမည်ကို လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်က သင့်ကိုယ်သင် မေးခဲ့လျှင် လွန်ခဲ့သည့် မကြာသေးမီအထိ Paypal မှ Bitcoins ဝယ်ယူခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်းတို့ကို တားမြစ်ထားသောကြောင့် သင်ရရှိမည့်အဖြေမှာ အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ၎င်းသည် ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီး ဤ virtual wallet ဝန်ဆောင်မှုသည် သင့်အား အင်တာနက်ငွေကြေးများဖြင့် ငွေပေးငွေယူပြုလုပ်ရန် ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။
သငျသညျလိုလျှင် Paypal ဖြင့် Bitcoins ကိုမည်ကဲ့သို့ဝယ်ရမည်နည်း။ အဲဒါကို မလုပ်ခင်နဲ့ နောက်မှာလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တဲ့အရာတွေ၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ တခြားအကြောင်းအရာတွေ၊ စိတ်မပူပါနဲ့၊ ကျွန်တော်တို့က အချက်အလက်တွေကို ဒီမှာ စုစည်းထားပါတယ်။
1 Paypal ဆိုတာဘာလဲ
2 Bitcoin ဘာတွေလဲ
3 Paypal ဖြင့် Bitcoins ကို အဆင့်ဆင့် ဝယ်ယူနည်း
3.2 သင့်ကိုယ်သင် စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။
3.3 မင်းက ဒေါ်လာနဲ့ အရောင်းအဝယ်လုပ်တယ်။
3.4 Paypal ဖြင့် bitcoins ဝယ်ရောင်းရောင်းရမည့် ပလပ်ဖောင်းများ
4 bitcoin ဖြင့် ငွေပေးချေမှုများကို လက်ခံပါသလား။
ပထမဦးစွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရေးကြီးသော အသုံးအနှုန်းတစ်ခုစီကို အနည်းအကျဉ်းမျှ သတ်မှတ်လိုပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည့် အမေရိကန် (အမေရိကန်) မူရင်းကုမ္ပဏီ Paypal အကြောင်းကို ပြောနေသည်။ အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုစနစ်ကို ကမ်းလှမ်းပါ။. Paypal အသုံးပြုသူများအကြား ငွေလွှဲခြင်းများ ပြုလုပ်သည်။ အဲဒါပါပဲ။ အခြားအသုံးပြုသူတစ်ဦးထံသို့ ငွေလွှဲရန်အတွက် နှစ်ဦးစလုံးတွင် Paypal အကောင့်တစ်ခုရှိရပါမည်။
အကောင့်အမျိုးအစားများစွာရှိပြီး ငွေပေးချေမှုများလည်း ရှိပါသည်။ အသုံးအများဆုံးမှာ နိုင်ငံတစ်ခုတွင်ရှိလျှင် ကော်မရှင်ခမရှိသော သူငယ်ချင်းများကြားတွင် ငွေပို့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အခြားနိုင်ငံများသို့ လွှဲပြောင်းပါက5ယူရို သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ အပိုကြေးများ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဤအတောအတွင်း bitcoin သည် cryptocurrency တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ငွေပေးချေမှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။. သုံးစွဲသူများအကြား လွှဲပြောင်းမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှတစ်ဆင့် အချင်းချင်း တူညီသည့် စီမံခန့်ခွဲသူ တစ်ဦးတည်း သို့မဟုတ် ဘဏ်တစ်ခုမျှ မရှိခြင်းဟူသော အချက်ဖြင့် လက္ခဏာရပ်ဖြစ်သည်။
Paypal ဖြင့် Bitcoins ကို အဆင့်ဆင့် ဝယ်ယူနည်း
ယခင်က ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ မကြာသေးမီအထိ Paypal ဖြင့် bitcoins မ၀ယ်နိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့် မပာုတ်ဘူး။ 2021 အစောပိုင်းတွင်၊ ကုမ္ပဏီသည် ဤဖြစ်နိုင်ချေကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် နေထိုင်သူများအတွက်သာ ဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ bitcoin သာမက၊ Litecoin၊ Ethereum သို့မဟုတ် Bitcoin Cash ကိုလည်း သင်သွားနိုင်သည်။
ဤပထမစမ်းသပ်မှုအောင်မြင်ပါက ၎င်းသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ နိုင်ငံအများအပြားသို့ ချဲ့ထွင်နိုင်သည်မှာ သေချာပါသည်။ ထို့အပြင် သတိထားရမည့်အချက်မှာ Paypal အသုံးပြုသူများအကြား လဲလှယ်ခြင်း၊ အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကို ကန့်သတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြဿနာများရှိပါက Paypal မှ လက်ကျန်ငွေကို တောင်းခံခြင်းကဲ့သို့သော လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းအချို့လည်း ရှိပါသည်။ သတိထားရမယ့် အချက်တစ်ခုကတော့ အဲဒါပါပဲ။ သင်၏ cryptocurrencies များကို ထိန်းချုပ်နိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်း ၎င်းတို့၏လက်ကျန်ငွေကိုသာ သင်ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ ဆောင်ပုဒ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်သိရန်၊ သင်လုပ်ဆောင်သင့်သည့်အဆင့်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။
အကယ်၍ သင်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ရှိနေပါက သို့မဟုတ် အခြားရွေးချယ်မှုများဖြင့် ထိုနိုင်ငံ၌ လည်ပတ်နိုင်လျှင်၊ သင်လုပ်ရမည်။ ကော်မရှင်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ Paypal သည် အခမဲ့မဟုတ်သောကြောင့် ၎င်းသည် လွှဲပြောင်းပေးသော ကော်မရှင်များမှ ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
သာမာန်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး စကားပြောကြသည်။ အခကြေးငွေစုစုပေါင်း၏ 5,4% နှင့် ပုံသေအခကြေးငွေ USD 0,30။ တစ်နည်းဆိုရသော်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှုန်းထားနှစ်ခုဖြစ်သည့် ပုံသေတစ်ခုနှင့် လွှဲပေးသည့်ငွေပမာဏအပေါ် မူတည်မည့် ကိန်းရှင်တစ်ခုကို ပံ့ပိုးရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Paypal ကော်မရှင်များအပြင်၊ သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သောအခြားအရာများရှိသည်။ bitcoin ကိုရယူရန် သင်ရွေးချယ်သော platform မှ ထို့အပြင် virtual ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများအတွက်အခြားကော်မရှင်များပင်ရှိသေးသည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် သင်ပေးရမည့်စျေးနှုန်းသည် သင်ရရှိမည့်တန်ဖိုးအစစ်အမှန်မဟုတ်ပေ၊ သို့သော် ၎င်းတို့သည် ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် အရေးကြီးသော အရေးကြီးသောကော်မရှင်များစွာကို ပေါင်းထည့်ရမည်ဖြစ်သည်။
သင့်ကိုယ်သင် စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။
bitcoins များရောင်းချခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်သင်တွေ့ဆုံရမည့်မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင်ပြီး သင့်ဒေတာကို စစ်ဆေးပါ။ ၎င်းသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြင့် လိုအပ်သည့်အရာဖြစ်သောကြောင့် bitcoin ဖြင့်လည်ပတ်နိုင်ရန် လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။
စပိန်ကိစ္စတွင် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း စာရွက်စာတမ်း (ဓာတ်ပုံနှင့်အတူ) သို့မဟုတ် စပိန်တွင် နေထိုင်ကြောင်း အထောက်အထား ပေးပို့ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်သည်။
မင်းက ဒေါ်လာနဲ့ အရောင်းအဝယ်လုပ်တယ်။
၏ကျယ်ပြန့်အများစု cryptocurrency နှင့်ပတ်သက်သော ပလပ်ဖောင်းများသည် အမြဲတမ်း US ဒေါ်လာနှင့် ကုန်သွယ်မှုပြုသည်။Paypal တွင် သင်ဤကဲ့သို့ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဝယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန် နှစ်မျိုးစလုံးကို USD ဟု ဆိုလိုသည်။
ငွေပေးချေမှုပလက်ဖောင်းသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် သင့်ငွေကြေးကို ပြီးပြည့်စုံစွာ ပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့် သင့်အကောင့်တွင် USD ရှိရမည်ကို မဆိုလိုပါ။ သို့သော် သင်ငွေဆုံးရှုံးသွားခြင်း သို့မဟုတ် ကော်မရှင်အချို့ကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ငွေကြေးပြောင်းလဲခြင်းမည်မျှရှိမည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။
Paypal ဖြင့် bitcoins ဝယ်ရောင်းရောင်းရမည့် ပလပ်ဖောင်းများ
ယခင်က ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း Paypal သည် ငွေပေးချေမှုကိရိယာတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ သင်အမှန်တကယ် bitcoins ကိုဝယ်ခြင်း/ရောင်းရန် လိုအပ်သောအရာသည် သုံးစွဲသူများအကြား အပြန်အလှန်ဖလှယ်နိုင်သည့် platform ဖြစ်ပြီး ၎င်းအပြင် Paypal မှ ငွေပေးချေမှုကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
LocalBitcoins ၎င်းသည် ဖင်လန်နိုင်ငံမှ မူလအစရှိပြီး 2012 ခုနှစ်ကတည်းက စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို အခမဲ့ ဝယ်ယူရောင်းချနိုင်သော်လည်း ကြော်ငြာများကို ဖန်တီးပါက ကော်မရှင်ခ (1%) ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Paypal ကိုအသုံးပြုခွင့်ပြုသည်၊ (အတည်ပြုပြီးနောက်၊ ဟုတ်ပါတယ်)။
ရွှဲသည်။ ၎င်းသည် လူသိများသော Old Capitol Trail ဖြစ်ပြီး 2015 ခုနှစ်ကတည်းက စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို အက်စ်တိုးနီးယားတွင် ထိန်းချုပ်ထားပြီး သင်ရောင်းချသူမဟုတ်ပါက ဝယ်ယူမှုကော်မရှင်ကို ကောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ (ထိုနေရာတွင် 1% ကောက်ခံသည်)။
eToro ။ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် မူရင်းနှင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး Paypal ကို ငွေပေးချေရန် လက်ခံသည့်သူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ၎င်းတွင် ကော်မရှင်များ၊ 2007% ကွဲပြားမှုနှင့် နေ့ချင်းညချင်း ကော်မရှင်များရှိသည်။
XCoins United States Financial Crime Control Network မှ ထိန်းညှိထားသော၊ ၎င်းကို 2016 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် သိသာထင်ရှားသော ကော်မရှင်တစ်ခုရှိသည်- 2,9% နှင့် ချေးငွေစုစုပေါင်း၏ $0,30 / 5% ဖြစ်သည်။
bitcoin ဖြင့် ငွေပေးချေမှုများကို လက်ခံပါသလား။
ယခုအချိန်မှစ၍ Bitcoins များကို ဝယ်ခြင်းနှင့် ရောင်းရန် သင့်လျော်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ စဉ်းစားသင့်သည်။ ယခုအချိန်တွင် နိုင်ငံခြားငွေကို ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအဖြစ် လက်ခံသည့် လုပ်ငန်းအနည်းငယ်သာရှိသည်။. ထို့အပြင်၊ bitcoin တစ်ခုတည်း၏မြင့်မားသောစျေးနှုန်းသည်လူနည်းစုမှ၎င်းကို ၀ ယ်ယူရန်သို့မဟုတ်တူးဖော်ခြင်းအတွက်ယခုအချိန်တွင်၎င်းတို့ကို ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်တူးဖော်ခြင်းအတွက်အမြတ်အစွန်းမရှိသောအနည်းစုမှအနည်းငယ်သာလက်လှမ်းမီနိုင်သည့်ငွေကြေးတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ထိုဒင်္ဂါးပြားများကိုရောင်းပါ။
သူတို့မလုပ်ဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီငွေကြေးတွေကို သင် Bitcoins ဝယ်ဖို့ လိုအပ်တာကြောင့် အဲဒီငွေကြေးတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မသုံးစွဲသေးပါဘူး။
Paypal ဖြင့် Bitcoins ကိုမည်သို့ဝယ်ရမည်နည်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး » စီးပွားရေးလုပ်ငန်း » Paypal ဖြင့် Bitcoins ကိုဘယ်လိုဝယ်မလဲ။